Idzi ndidzo nhau dzeManotsi mu macOS High Sierra | Ndinobva mac
Kana iwe uchinge wagadzirisa mashandiro esisitimu yeMac yako kuenda ku macOS High Sierra, imwe yenhau dzaunofanirwa kuziva ndidzo dzakabatanidzwa mukunyorera manyorerwo. Kwenguva yekutanga isu tine mukana wekuona matafura uye kugadzirisa akakosha manotsi ayo kuitira kuti varege kudzika mumuti wezvinyorwa zvatakasika.
Zvakare tinoona kuti avo vanobva kuCupertino vavandudza izvo zvinogona kuvandudzwa kubvira, sezvakatsanangurwa muKeynote, iyo macOS High Sierra iko kuvandudzwa kwesystem yatove inonakidza.
Mazhinji ndiwo matsva ayo iyo macOS High Sierra Uye sekugara kwatange tichikuudza muzvinyorwa zvinoverengeka, ini ndiri kubva kuMac tichajekesa yega yeshanduko idzi kuitira kuti vaverengi vedu vese vagone kunakidzwa nazvo.
Muchikamu chino ndiko kutendeuka kweNotes application. Ichi chidiki chishandiso, icho kune vazhinji chisina basa, iko kunyorera kunoenderana pakati pemidziyo uye iyo yatinogona kuwana inobatsira kwazvo kuziva. Aya maviri matsva ndiwo kutumira zvinyorwa uye kuwedzera matafura.
Kuti uwedzere matafura, isu tinongofanirwa tinya pane iyo nyowani icon mubhawa yepamusoro, mushure meizvozvo tafura ine mitsara miviri nemakoramu maviri akawedzerwa. Pese patinodzvanya mitsara miviri nemakoramu maviri akawedzerwa kuti ipapo nekudzvanya kurudyi pazviri tinogona kuwedzera mamwe makoramu uye mitsara.
Kana zviri zvekumisikidza manotsi, izvo zvaunofanirwa kuita kurudyi tinya pane yakatogadzirwa katsamba uye mune pop-up menyu inowoneka yatinofanira kusarudza Pin up, mushure meizvozvo chinyorwa chinogadziriswa kumusoro kwerondedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Idzi ndidzo nhau dzeManotsi mu macOS High Sierra